Guddomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa kula kulmay Safiirka midowga Yurub. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa kula kulmay Safiirka midowga Yurub.
Mudane Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta xafiiskiisa Muqdisho ku qaabilay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Veronique Lorenzo oo ay ka wada hadleen dhowr arrimood oo ku qotoma xaaladaha dalka.
arrimaha ay ka wada hadleen Guddoomiyaha iyo Safiirku waxaa ka mid ah dhameystirka Dastuurka Qaranka iyo sidoo midowga Yurub uu door muuqda uga qaadan lahaa guddomiye jawaari ayaana u sheegay Danjiraha in dowladda Soomaaliya ay dib u egista dastuurka ku saleyn doonto baahida iyo rabitaanka Bulshada Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha golaha shacabka Mr Jawaari ayaa sidoo kale la kulmay Safiirka dowladda Ingiriiska u Qaabilsan Soomalaiya oo uu kala hadlay sidii dowladda Britain usii kordhi lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya.
Previous articleGuddiyada joogtada ah ee golaha shacabka oo maanta kulan isugu ymid
Next articleCiidamada Ciraaq oo qabsaday magaaladii ugu danbeysay ee gacanta ugu jirtay Daacish